Khabar Kantipur » मुख्य समाचार
अभिनेत्री श्वेता खड्काले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको ‘कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरिन् । श्रीकृष्णकै अर्को फिल्म ‘कोहिनुर’ खेलेपछि उनीहरूले बिहे गरे । तर, विवाहको एक महिनामा नै श्रीकृष्णको निधन भयो । त्यसपछि विक्षिप्त बनेकी श्वेता अहिले नयाँ जीवन बाँचिरहेकी छिन् । उनी ‘श्वेता श्री फाउन्डेसन’मार्फत.....
२७ असार, काठमाडौं । अविरल परेको वर्षाले राजधानीको कुलेश्वर क्षेत्र डुवानमा परेको छ । कुलेश्वरको म्याट्रो, कुलेश्वर अपार्टमेन्ट, ओरियन्टल कोलोनी पनि डुवानमा परेको छ । भएका घरको पहिलो तला सम्पूर्ण डुवानमा परेका छन् । उक्त क्षेत्रमा आएको वाढीले थुप्रै ग्यासका सिलिण्डर, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडाहरु पनि बगाएर.....
काठमाडौँ, २३ असार । नालीबाट निकालिएको हिलो किन्नका लागि झगडा हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो कि राजधानी काठमाडौंको अति व्यस्त सहर न्युरोडभित्र नालीबाट निकालिएको हिलो (फोहोर) किन्न मारामार हुन्छ । र कहिले त झगडा नै पर्ने गरेको छ । न्युरोडको नालीमा अवरोध आएको सूचना पाउनेबिक्तिकै हूलका.....
एजेन्सी, २३ असार–कोपा अमेरिकाको उपाधि आयोजक ब्राजिलले जितेको छ । सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा ब्राजिलले पेरूलाई ३–१ गोलले पराजित गर्दै उपाधि आफ्नो पोल्टामा पारेको हो । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफको १५ औं मिनेटमा एभरटनले गोल गर्दै ब्राजिललाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि खेलको ४४ औं मिनेटमा पेरूले बराबरी.....
पछिल्लो समय मुन्द्रेको कमेडी निकै चर्चामा रहेको छ । हास्यास्पद र नयाँ नयाँ सेलिब्रेटीहरुको आगमनले मुन्द्रेको कमेडी क्लब हेर्न लायक बनेको छ । दिपा श्री प्रमुख अतिथिको रुपमा रहने यश कार्यक्रम जितु नेपाल “मुन्द्रेले” चलाउछन । यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षक फुलन्देकी आमा, अकबरी, लट्टे हुन उनिहरुले पाहुनाका.....
सबैको गन्तब्य यहि हो। लोभलाभ नगर्नु होला ! जीवन बदल्न यो लेख पढ्नुहोला हामि सबैलाई लाग्ने गर्छ कि मेरो यति धेरै सम्पत्ति छ , मेरो यस्तो चिनजान छ , मेरो यस्तो बलियो छोरा – छोरी वा आफन्त छन् । तर याद गरौँ त ! के हामीलाई हाम्रो मृत्यको समयमा इनले बचाउन सक्छन् ? आखिर जीवन छोटो छ । जतिसुकै लोभ र लालच गरे पनि एक दिन मर्नु.....
बागलुङ- जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका–४ हिलका एक बालक १४ दिनदेखि वेपत्ता भएका छन् । बागलुङ सदरमुकामस्थित धौलागिरी चोकमा बस्दैआएका १३ वर्षीय अनिल राई गत असार ६ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएको परिवारले जनाएको छ । राई बागलुङस्थित विद्यामन्दिर माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छन् । आकाशे रंगको सर्ट.....
नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी खेलाडी सरीता मगरले हराईरहेकी आफ्नी आमालाई खोजेर सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । आफ्नो फेसबुकमा भाबुक स्टाटस लेख्दै उहाँले आफ्नी आमालाई खोजिदिन सबैसामु आग्रह गर्नुभएको हो । सोलुखुम्बु सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका १० चैलुङ हाल काठमांण्डौ पैँयुटार बस्दैआउनु भएकी इन्द्रमाया.....
अनिल खत्री, गुल्मी : गुल्मीमा उउटा बिद्यालयमा रोलनम्बर १३ सुन्दा पनि मानिस झसकिन्छन् । सुन्दा अचम्म लाग्न पनि सक्छ । तर जिल्लाको एउटा विद्यालयमा झण्डै ५ दशकदेखि एउटा रोल नम्बर १३ नराखि बिद्यार्थीको हाजिरी गरिर्दै आएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा रोल नम्बर १३ नलेखेको.....